स्वस्तिमाको प्रश्न सुरजको जवाफ - कुराकानी - साप्ताहिक
स्वस्तिमाको प्रश्न सुरजको जवाफ
स्वस्तिमा खड्का, अभिनेत्रीको प्रश्न सुरज पाण्डे र अभिनेताको जवाफ
निर्देशक निश्चल बस्नेतकी धर्मपत्नी स्वस्तिमा खड्का नायिकाका रूपमा प्रस्तुत भएको चलचित्र ‘लभ लभ लभ’ प्रदर्शनको तयारीमा छ । आधा दर्जन नेपाली चलचित्रमा बालकलाकारका रूपमा काम गरिसकेका सुरज पाण्डे उक्त चलचित्रमा स्वस्तिमाको जोडीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । हाम्रो जोडी स्तम्भका लागि स्वस्तिमाले सुरजसँग केही जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।
स्वस्तिमा : तिमी अचानक अभिनेता भएकी हौ कि विगतमा पनि अभिनयको अनुभव थियो ?
सुरज : अभिनेताचाहिं पहिलो पटक नै भएको हो, तर विगतमा मैले बालकलाकारका रूपमा थुप्रै चलचित्रमा अभिनय गरेको छु । दुई किनारा, कर्तव्य, कस्तो साइनो, नेपाल, अजम्बरी नाता, दोबाटो आदि चलचित्रमा तिमीले मलाई देख्न सक्छौ ।
स्वस्तिमा : ओहो ! त्यति धेरै चलचित्रमा कसरी मौका पायौ त ?
सुरज : नेपाली चलचित्रका पुराना हस्ती नगेन्द्र घिमिरे मेरो मामा हुनुहुन्छ, उहाँकै कारण मैले बालकलाकारका रूपमा अभिनय गर्ने अवसर पाएको हुँ ।
स्वस्तिमा : अहिले अभिनेता बन्ने जाँगरचाहिं कसरी चल्यो नि ?
सुरज : चलचित्र ‘नेपाल’ मा अभिनय गर्दा म नौ वर्षको थिएँ । ए लेभल पूरा गरेपछि अभिनयमै आउँछु भन्ने थियो । यसमा ५ फिट साढे ८ इन्च अग्लो ज्यान भएको व्यक्ति अभिनेता बन्दा फरक नपर्ला भन्ने सोचले पनि काम गरेको छ ।
स्वस्तिमा : अभिनेता बन्न त अरू धेरै कुरा पनि सिक्नुपर्छ नि ?
सुरज : सिकेको छु त । नाट्यकर्मी सुनिल पोखरेलसँग झन्डै ६ महिना अभिनयको प्रशिक्षण लिएको छु । नृत्यको प्रशिक्षण लिन थालेको त तीन वर्षभन्दा बढी भैसकेको छ ।
स्वस्तिमा : ‘लभ लभ लभ’ मा हाम्रो जोडी कत्तिको जमेजस्तो लाग्छ ?
सुरज : मलाई त हाम्रो केमेस्ट्री मिलेजस्तो लाग्छ । स्क्रिप्टले मागेको जोडीझैं देखिएका छौं भन्ने प्रतिक्रिया पाएको छु ।
स्वस्तिमा : यो जोडीका बारेमा अरू के–के सुनेका छौ नि ?
सुरज : गीत तथा ट्ेरलर रिलिज भएपछि हाम्रो जोडी मिलेको छ भन्ने सुनेको छु । चलचित्र प्रदर्शन भएपछि हाम्रो जोडी हिट हुनेछ भन्ने कुरामा ढुक्क पनि छु ।
स्वस्तिमा : चलचित्रमा नआएको भए कुन क्षेत्र रोज्थ्यौ ?
सुरज : मेरो बुवा–आमा बिजनेस गर्नुहुन्छ, म पनि त्यही पेसामा जान्थें होला तर अभिनयलाई मैले सधैं आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु, त्यसैले अन्त कतै जान्नथेँ ।
स्वस्तिमा : पहिलो चलचित्रमा अभिनय गरेपछि आफू कुन कुरामा कमजोर छु भन्ने लागेको छ ?
सुरज : एउटा कलाकारले जीवनभरि नै सिकिरहनुपर्छ जस्तो अनुभव गरेको छु । नृत्य तथा अभिनयमा मैले अझ बढी मेहनत गर्नुपर्छ ।
स्वस्तिमा : दोस्रो–तेस्रो चलचित्रको सम्भावना कत्तिको छ ?
सुरज : मलाई तीनवटा चलचित्रबाट अभिनयको प्रस्ताव आइसकेको छ, तर वैशाख १ गते हाम्रो चलचित्र प्रदर्शन भएपछि मात्र अन्य चलचित्रका बारेमा योजना बनाउनेछु ।
खुला विश्वविद्यालयले सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर दिन्छ फाल्गुन १५, २०७५
झर्किएर बोलिदिन्छु, आफैं फोन काटिन्छ : करिश्मा ढकाल फाल्गुन १२, २०७५